विरगञ्ज पब्लिक कलेजद्वारा दौड प्रतियोगिता - News Today
पर्सा, १३ पुस । विरगञ्ज पब्लिक कलेजद्वारा आयोजित साता व्यापी विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रवार चौथो दिन विरगञ्जको नारायणी रंगशालामा दौड प्रतियोगिता आयोजना गरियो ।
चार सय मिटर फ्रि दौड, सय मिटर दौड र कम गतिमा साइकल रेस अन्तर्गत विभिन्न प्रतियोगीताहरु सम्पन्न भएको हो । साताव्यापी खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत १५ गते आइतबार हुने विभिन्न खेलहरु को प्रतिस्पर्धा गराई आदर्श स्कुलको प्राङ्गणमा समापन गरिने निर्णय गरिएको छ ।
विरगञ्ज पब्लिक कलेजका निर्देशक डा. दिपक शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु शुभारम्भ गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई उच्च स्तरीय बनाउन विरगञ्ज पब्लिक कलेजका हरिरत्न तुलाधर, किरन शाक्य, पुजा साह, अविन्द, बासु, लगायतका शिक्षकहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको जनाईएको छ ।
Previous : तीन महिना धाउँदा पनि प्रहरीले उजुरी नलिएको आरोप
Next : अमसोतको १४ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
युनिसेफद्वारा राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह र भारदह अस्पताललाई सहयोग
धाकधम्की विरुद्ध चाँदनी चौकका ब्यापारीहरु गोलवद्ध
तिरहुत गापामा एक कोरोना पोजेटिभः सप्तरीमा ५६ पुग्यो कोरोना संक्रमित
हटैलका युवकको दोस्रो पटकको रिपोर्ट नेगेटिभः अब तेस्रो रिपोर्टको प्रतिक्षा
सप्तरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५५ पुग्यो
शम्भुनाथ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि विरुद्ध स्थानीयको आक्रोश
स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको प्रश्नः कहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने ?
राजविराजमा पिसिआर परीक्षणको डेमो परीक्षण सफल
नयाँ आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितहरुलाई भर्ना गर्ने कार्य थालियो